जनकपुर घटनापछि जिम्मेवारी थपिएको छ : सांसद शाह
विनय ज्याेती सोमवार, कार्तिक ४, २०७६, १५:३४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । विभिन्न कारण देखाउँदै एयरलाइन्सले आन्तरिक विमान डिले गराउने परिपाटी नेपालमा नविन होइन् । पछिल्लो समय नेपालमा विमान उडान ढिलाईका कारण विभिन्न प्रकारका घटना बढ्न थालेका छन् । विमान उडान ढिलाई समान्यजस्तै हुन थालेको छ । केही दिन अगाडि मात्र सांसद प्रमोद शाहलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरियो । जनकपुर विमानस्थलमा हातपात र ताडफोड गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी बतायो । उनी पक्राउ पर्नु जायज हो वा हाेइन कानुनको कुरा भयो तर आन्तरिक उडानमा केही समस्या पक्कै रहेको जानकारहरुले बताउने गरेका छन् ।
प्रमोद शाह पक्राउ प्रकरणले यस्ता समस्यालाई बाहिर ल्याएको छ । शाहले विमान समयमा नआएको र डिले बारेमा जानकारी पनि नदिएको आरोप लागाएका छन् । विमान आउनमा किन ढिला भयो ? र त्यस विमानमा सवार हुन लागेकी एक विरामीका बारेमा कुरा राख्दै गर्दा भएकाे घटनालाई सांसदले एयरलाइन्स कम्पनीकाे कर्मचारीलाई हातापाई गरेको भनेर सारा सञ्चारमाध्यममा समाचार फैलिएको थियो । उनले हातपात गरेकाे भनेर उनलाई प्लेनमा सवार गराउन बुद्ध एयर तयार भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीकाे आग्रहपछि मात्र एयरलाइन्सले सांसदलाई प्लेनमा यात्रा गराउन तयार भयाे ।
सांसदले देखाएको रीस एकछिनको झोंक होला तर नेपालको आन्तरीक उडानमा देखिएका यस्ता समस्या भने नयाँ होइन । यात्रुप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्ने एयरलाइन्सले आफ्नो धर्म नमानेको धेरै यात्रुको बुझाइ छ ।
केही समयअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई चढेको बुद्ध एयरको विमानमा पनि एक प्रकारको कोलाहल सिर्जना भएका थियो । जसका कारण बुद्ध एयरले स्पष्टीकरण सहीतको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्यो । यो पनि लापरवाहीको एक मानक हो भन्न सकिन्छ । तर, जनकपुरमा भएको घटना र प्लेन डिलेलाई लिएर हालसम्म पनि बुद्ध एयले स्पष्टीकरण नदिएको सांसद शाह बताउँछन् ।
सांसद शाह त्यो दिनको घटनालाई यसरी बयान गर्छन, ‘प्लेन चढ्नलाई हामी एयरपोर्ट पुगेका थियौं । हामी तीन जना, प्रदेश सांसद प्रभु शाह र मनोज सिंह पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु( प्रदेश सांसद) यती एयरमा हुनुहन्थ्यो, हामी बुद्धमा । उहाँहरुको १२ बजेको प्लेन थियो भने हाम्रो साढे ११ बजेको प्लेन थियो । तर १२ बजे सम्म दुवै प्लेन आउँदै आएन । साढे ११ को पनि आएन । १२ बजेको प्लेन सभा १२ बजे आयो । त्यसपछि उहाँहरु हिँड्नुभयो ।
जब हामी त्यहाँ थियौँ, त्यतिबेला एकजना विरामी पनि हुनुहुन्थ्यो । सिकिस्त हुनु भएको हामीले चाल पायौँ । उहाँलाई व्हीलचेयरमा ल्याइएको थियो, अवस्था एकदम नाजुक थियो । विरामी छटपछटीइरहेको अवस्था थिए । तर प्लेन आएको थिएन् । पौने एक भैसक्यो तर पनि प्लेन आको छैन् । साढे एक भैसक्यो प्लेन आएन । त्यसपछि मैले त्यहाँकै एकजना भाइलाई के हो यस्तो ढिलो ? भनेर सोधें । एक बजे पछि मैले सिडियोलाई फोन गरेर यहाँको आवस्था यस्तो छ भनेर जानकारी गराएँ । (उनले धावन मार्गमा पशुचौपाया आउने गरेको र यास्तो संवेदनशील ठाउँमा यस्तो प्रकारको काम हुन नदिन जोड दिनुपर्ने कुरा पनि सिडिओलाई बताएको कुराकानीमा उल्लेख गरेका थिए) । उहाँलाई यो कुरा(डिले) बताउँदा पनि काम चाँडै भैहाल्छ भन्ने कुरा मात्र बताउनु भयो । सिडियो साबसँग कुरा भएपछि मैले हाकिमलाई पनि फोन गरें, हाकिमसाबले पनि सिडिओले भनेजस्तै भन्नुभयो । मैले थप प्रश्न गर्दै – केहो यस्तो तपाइँले व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन ? सानो गल्तीले पनि ठूलो समस्या हुन्छ भनें । उहाँले म सबै कुरा समाधान गरिहाल्छु भन्नुभयो । एक होइन दुई घण्टा वितेको थियो ।
पौने दुई बजे विरामी काम्न थाल्नुभयो । एसी र फेन चलिरहेको थियो । त्यसपछि मलाई चिसो बन्द गर्न मन लागेर एसी र फेन बन्द गर्न लगाएँ । आफैंले भनेर त्यो विरामीलाई केही दक्षिणतिर सार्न लगाएँ । म आफैं पनि श्रम तथा उपभोक्ता हितको मान्छे । ११ : ३० बजे प्लेन आउँछ भनिएको छ । तर २ बज्न लागिसक्यो प्लेन नआउने । विरामी मान्छेलाई कति खर्च लागेको छ त्यो पनि नव्योहोर्ने । त्यसैले म भित्रैबाट आक्रोशित बनें । एक मानवताको नाताले यस्तो विचार सबैलाई आउँछ नी । त्यसैले मैले त्यहाँ रहेको भाइलाई, यस्तो के हो ? विरामीको हालत यस्तो छ केही पनि नगर्ने ? भनें । तर मानिसलाई गाली र हातपात गर्ने काम भने गरेको होइन् । सानो धक्का लाग्न गयो । त्यसपछि प्रहरी त्यहाँ छँदै थियो । उसले बढीमा ३० सेकेन्ड भित्रैमा हामीलाई उता लगेको थियो ।’
उनी यसअगाडि पनि प्लेन डिलेमा परेकाे कहानी सुनाउँछन् । भन्छन, ‘४ घण्टासम्म पनि प्लेन डिले भएका घटनाहरु छन् । नेपालमा प्लेन चढ्ने सबैसँग यस्ता पीडा रहेका छन् ।’ सांसद शाह प्लेन डिले भएको घटनाहरुलाई कानुनी रुपमै एयरलाइन्सले जरिवाना तिर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी प्लेन डिले भएको मिनेटका आधारमा एयलाइन्सलाई जरिवना तिराउनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी थप्छन, ‘कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । हामी सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।’
त्यो समयमा भएकाे घटनाहरुलाई सानो ३०–४० सेकेन्डको भिडियो मात्र बाहिर ल्याएर आफूलाई बदनाम बनाउने काम गरिएको सांसद शाहको बुझाई छ । उनी सांसदलाई गरिनुपर्ने सामान्य व्यवहार पनि नगरिएको बताउँछन् । ‘मलाई पहिले धक्का दिएपछि मैले पनि धक्का लिएको हुँ । त्यो भिडियोमा मलाई दिएको धक्का काटिएको छ र मैले गरेका व्यवहार मात्र रखिएको छ ।’ उनले जनतापाटीसँग भने ।
देशका राम्रा मिडियाले पनि त्यही भिडियो सर्वजनिक गरेर अपुरो सूचना दिएको उनको तर्क छ । त्यस्तै उनले आफू मधेसी मूलको भएकै कारण बुद्ध एयरका कर्मचारीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘म मधेसी भएकै कारण मलाई मुद्दा लगाएको छ । विगत ६० वर्षकाे इतिहासमा कसैलाई यस्तो मुद्दा लगाइएकाे छैन । यसअघि प्लेनमा मन्त्रीहरुले बाजाबाज नै गरेको घटना पनि छ । तर कसैलाई मुद्दा लागेको छैन् ।’ सांसद शाहले आफू अल्पसंख्यक भएकै आधारमा मुद्दा लगाएको बताउँछन् । एउटा दुःखमा परेको व्यक्तिका लागि बोल्दा मुद्दा लगाउने कार्य अत्यन्तै निन्दनीय भएको आरोप पनि उनले लगाए । साथै यस घटनाबारे हालसम्म पनि बुद्ध एयरले कुनै स्पष्टीकरण नदिनु झन दुखद पक्ष रहेकाे बताउँछन ।
सांसद शाह त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानिस्थलमा आइपुगेपछि पक्राउ गर्न लागिएको आफूलाई पहिल्यै थाहा भैसकेको बताउँछन् । भन्छन, ‘म पक्राउ पर्दैछु भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो । मलाई छलेर पक्राउ गरिएको हो भनेर कसैले नसोचे पनि हुन्छ ।’
शाहले त्यसपछि नेकपाका केही सांसदहरुलाई यस घटनाबारेमा जानकारी गराएका थिए । नेकपाका सांसदहरुले यो पक्राउ धेरै समयसम्म कायम नहुने र शाहले सफाई पाउने बताएका थिए । साथै केही सांसदहरुले राम्रो काम गरेको भनि प्रसंशा गरेकाले आफू पक्राउ परे पनि छुट्ने कुरामा विस्वस्त थिए । उनलाई सत्तारुढ दलका केही नेताले मुद्दा चलाएपनि केही फरक नपर्ने बताएका थिए ।
रीहा भएपछि आफू पीडितहरुको पक्षमा थप लागि परेर काम गर्ने उनले बताए । राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसद शाहले जनकपुर घटनबारे संसदमा आवाज उठाउन बताएका छन । सो घटनापछि सांसद शाह थप जिम्मेवार भएको महशुस गर्छन् । रीहा भैसकेपछिको सामाजिक सञ्जालमा आएका शुभकामना सम्झँदै उने भने, ‘म हिरासतमै हुँदा पनि १३ जिल्लामा प्रदर्शन भएछ । मैले कल्पनै गरेको थिइन । त्यस्तै म छुटेपछि पनि थुप्रै साथिहरुले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । फेसबुकमा पनि राम्रो रेस्पोन्स आएको छ । यसले मलाई अगाडि बढ्न थप हौसला प्रदान गरेको छ ।’
यस घटनाबाट जनपक्षीय काम गरेमा जनताले साथ दिने रहेछन् भन्ने लागेको बताउँछन् । सांसद शाहले एयरलाइन्सले गरेको सबै नराम्रा कामको भण्डाफोर गर्ने र त्यसकाे अन्त्यका लागि अभियान चलाउने बताए । संसदमा आक्कलझुक्ल मात्र बोल्ने गरेका सांसद शाहले यो मुद्दालाई संसदसम्मै लिएर जाने भएका छन् । उनले बताएअनुसार अब विमानले गर्ने ठगी, एउटै प्लेनले एउटै समयमा तीन ठाउँसम्म टिकट काट्ने जस्ता समस्यालाई संसदमा राख्ने छन् । त्यसअगाडि उनले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर त्यो घटनाबारेमा सबैलाई जानकारी दिने बताए ।
प्लेन डिलेको समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले बनाएको नियमलाई एयरलाइन्सले छिटै लागू गर्नुुपर्ने उनी बताउँछन्। शाह आफूले उठाएका मुद्दाकाे सुनुवाई भएमा सबै यात्रुलाई सहज हुनेमा विश्वस्त छन् । त्यसैले जनकपुर विमानस्थलमा भएको घटनाप्रति उनलाई कत्तिपनी पश्चताप छैन । त्यस घटनाले सही विषयको उठान गरेकाले आफूलाई गौरव लागेको उनी बताउँछन् ।
घरघरमा तिहार, चोकचोकमा तिहार ‘ह्याप्पी तिहार’ हिन्दुहरुको महान चाड तिहार लागेसँगै सबैतिर रौनक छाएको छ । यमपञ्चक, दिपावली जस्ता नामले परिचित चार्ड फूलहरुको चार्ड हो । काठमाडौंका चोक र घरहरु अहिले फूलले सजिएको छन् । सबैतिर फूलको किनबेच ह्वातै बढेको छ । मानिस आआफ्ना घरको आँगन, दलान, पूजाकोठा, बाल्कानीमा फूल र झिलिमिली बत्तिले सजाउन थालेका छन् । आइतवार, कार्तिक १०, २०७६, १२:५४:००
कौशी खेतीः खान पाइन्छ विषादीमुक्त तरकारी तरकारीको अभावका कारण विषादीयुक्त तरकारी खान मानिसहरु बाध्य भएका छन् । विदेशबाट आएका खान अयोग्य तरकारीले मानिसको स्वस्थ्यमा असर गर्ने पक्का छ । अर्कोतर्फ दैनिक उपभोग गरिने तरकारी विदेशबाट आयात गरिनुपर्दा देशलाई ठूलो घाटा लागेको छ । आइतवार, असार २२, २०७६, १३:४७:००
राडरलेस समाजको ट्रेन्डिङ नम्बर वान नेपाली समाजमा भारतीय फिल्मको प्रभाव धेरै पर्न थालेको छ । यसले हाम्रो संस्कृतिलाई धरापमा पार्ने देखिन्छ । यसले नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा पनि असर पारेको समय समयमा मानिसहरुले बताउँदै आएका छन् । तर चिन्ताको विषय भनेको आफ्नो धर्म र संस्कृतिनै हराउने हो कि भन्ने हो । बुधवार, असार २५, २०७६, १६:४८:००